Roobab lagu diirsaday oo ka da?ay degmooyin hoos-yimaada J/hoose. – Radio Daljir
Oktoobar 29, 2011 12:00 b 0
J/hoose, Oct, 29 ? Roobab aad loogu diirsaday ayaa la sheegay inay ka da?een deegaannada Qooqaani, Taabta, Haawinaa, iyo degmooyin kale oo dhammaantood hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in 2-dii maal-mood ee ugu dambaysay roobabkaasi ay ka da?ayeen deegaanno hoos yimaada J/hoose, waxaana ay saamayn ku yeesheen qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan deegaano hoos ka tirsan J/hoose.
Raxmada Eebbe ee ka da?day gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa aad ugu diirsaday boqolaal qoys oo ku noolaa halkaasi, waxaana ay ku soo aadaysaa xilli abaarta ku dhufatay K/Soomaaliya ay u dilaacday macaluul aad u daran.
Roobabka ka da?ay deegaannada ka tirsan Jubbada Hoose ayaa la tilmaamayaa inay burburiyeen guryo ka samaysnaa cooshado, kuwaasoo ay ku noolaayeen qoysas reer miyi ah, oo abaartii ku dhufatay koonfurta Soomaaliya dhaafisay xoolohoodii.
Maraakiibta Ingiriiska oo la saarayo ilaalo hubaysan, si ay iskaga difaacaan weerarada burcad-badeedda.